Negeria ရှိငါးခူတောင်သူလယ်သမားများသည်စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနှင့်အတူလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည်, အရာတစ်နိုင်ငံလုံးထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်. အချို့သောလယ်သမားများကငါးမွေးမြူရေးတွင်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်.
ရေချိုငါးအစာတောင့်များပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသောအစာအာဟာရများသည်စပါးဖြစ်သည်,deoiled ဆန်ဖွဲ, ဂျုံဖွဲ, ဝါဂွမ်းအကိတ်နှင့်မြေပဲကိတ်မုန့်သည်၎င်းတို့အားအစာကျွေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ဈေးချိုလိမ့်မည်။ ငါးမွေးမြူသူတစ် ဦး ကသူတို့ကိုငါးလေးများပြုလုပ်ရန်စက်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ,ထို့အပြင်အခြားငါးမွေးမြူသူများအားလည်းရောင်းချနိုင်သည် .
ငါတို့ ငါးအစာတောင့်ကြိတ်ခွဲ ငါးအစာတောင့်နှင့်တိရိစ္ဆာန်အစာများပြုလုပ်နိုင်သည်,.ဒါကြောင့်အစေ့ကို process နိုင်ပါတယ်,ချေး,ကောက်ရိုးစာ,ကျောက်စိမ်း,ဆန်ခွံ,မြက်မုန့်ညက်,မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ pellets.it ကျွေးမွေးဖို့နေကြာ, စားသုံးမှုနိမ့်, တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်, စသည်တို့, လက်ရှိအစာစက်မှုလုပ်ငန်းစံပြအမှုန်ပစ္စည်းကိရိယာများအစာကျွေးသည်.